Vokam-pifidianana : Mitarika amin’ny biraom-pifidianana maro Ravalomanana -
AccueilSongandinaVokam-pifidianana : Mitarika amin’ny biraom-pifidianana maro Ravalomanana
Miovaova araka ny faritra sy ny faritany ny voka-pifidianana tamin’ity fifidianana izay ho filoham-pirenena ity. Amin’ny ankapobeny dia mitarika amin’ny biraom-pifidianana maromaro ny kandida Ravalomanana indrindra ny eto Antananarivo, Antsirabe ary Ambatondrazaka. Santionany amin’izany ny teny Mahazoarivo izay nahazoany vato 198 tamin’ireo mpifidy 378 tao amin’ny biraom-pifidianana faha-7, 167/320 tao amin’ny biraom-pifidianana faha-8, 176/348 tao amin’ny birao faha-5 ary 170/333 tao amin’ny birao faha-6. 206/348 sy 171/342 kosa izany tao amin’ny birao voalohany sy faha-2.
Toy izany koa ny tany Morondava tao amin’ny fokontany Beroboka atsimo sy tany Anarobato ka nahazoany vato 138 sy 153. Ny tao Antsenakely Antsirabe dia nitarika tamin’ny 203/360 ny kandida Ravalomanana, 156/299 tao Ambohibe Antsirabe ary 228/374 tao Vinaninkarena Antsirabe.
230/322 kosa no vato azony tany Ankarinomby Vivaninkarena ihany.
Nitarika ihany koa ny kandida Ravalomanana tamin’ny biraom-pifidianana telo tamin’ny fokontany tetsy Tsaralalana ka 175/310 tao amin’ny biram-pifidianana faha-9, 140/370 tao amin’ny birao faha-6 ary 155/341 tao amin’ny birao faha-10.